Vamwe Fekitori, Vatengesi - China Vamwe Vagadziri
chando chando evaporator
Vanotengesa echando vanoita
Slurry chando muchina
Bvisa chando michina
Bhora chando mafomu
Dhaimondi chando anoumba
Cube chando anoumba
Dehenya chando anoumba
Ice kurongedza muchina
Flake chando evaporator
20T chubhu yechando muchina
10T Tube chando muchina
5T chubhu yechando muchina
3T chubhu yechando muchina
Chigadzirwa Chigadzirwa: Kune vashoma vekutengesa echando muchina vashandisi uye vatengi vanogona kushandisa echando panguva yakajairwa nguva mukati mezuva, ivo havadi kuunza iyo firiji system yeyavo chando chengeto imba. Kune hombe hombe yekuchengetera chando imba, mafiriji zvikamu zvinodiwa kuti zvirambe zviri mukati mekupisa zvisizvo kuitira kuti chando chigone kuchengetwa mukati chisina kunyungudika kwenguva yakareba. Makamuri echando anoshandiswa kuchengetedza ice chando, block ice, mabhegi echando machubhu zvichingodaro. Zvimiro: 1. Cold chengetedzo bhodhi kuputira ukobvu ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Herbin chando kurongedza muchina unosanganisira zvikamu zvitatu: kudyisa, kuyera, kurongedza. Imwe dynamo yekupa simba, sikuruu inotakura chando. Isu takazvipira kukupa iri nyore, yakavimbika, ine hupfumi chando kurongedza muchina. Zviratidzo: Chimiro chakareruka, huremu hwakareruka, kutakura zviri nyore. Yese interface inovharwa nesimbi isina chinhu 304, inonyatsoenderana nehutsanana hwekudya. Kugadziriswa kwesystem ese anoshandisa anozivikanwa mabhenji.
Chigadzirwa Chigadzirwa: Herbin inopa chando kupwanya michina yekupwanya matombo echando, mazaya machubhu, zvichingodaro. Ice rinogona kupwanywa kuita zvidimbu zvidiki kana kunyange hupfu. Chando chakapwanyika chinogona kusangana nehutsanana hwechikafu kana mutengi achida kudaro. Zvimiro: Goko iri rakagadzirwa neplate yesimbi uye simbi isina simbi, kuitira kuti ive nechokwadi chekuratidzika uye kwakanaka. Modular dhizaini inoita kuti zvive nyore uye zvakachengeteka kushanda. Kubudirira kwepamusoro uye hupenyu hwakareba hwebasa. Yakagadzirwa nesimbi isina tsvina 304. Maitiro echando-crushi ...
Ice mabhegi zvinhu zvinosangana nechikafu sanitary standard, iyo inovimbisa chikafu chemhando yechando. Ice mabhegi ane musiyano saizi aripo, ayo anogona kuve akagadziriswa zvinoenderana nemutengi yemuenzaniso Ruzivo rwekutengesa nemarogo akasiyana anogona kudhindwa pamabhegi. Transparent mabhegi asina kudhinda ndiwo anodhura.
Adress:China, Kumabvazuva kweAsia